SADC Summit: Zimbabwe opposition rejects calls for compromise - WELT
SADC Summit: Zimbabwe opposition rejects calls for compromise
Southern African leaders said at the SADC summit on Sunday that Zimbabwe’s political rivals must split the leadership of a key ministry, a move rejected by Morgan Tsvangirai and the opposition (MDC) in a further indication that power-sharing talks were unravelling.
But opposition leader Morgan Tsvangirai said he was "shocked and saddened“ by the outcome of a summit, which brought together leaders and ministers of SADC countries for more than 12 hours of talks on Zimbabwe’s political impasse and the violence in eastern Congo.
"The MDC is shocked and saddened that SADC summit has failed to tackle these key issues ... a great opportnity has been missed by SADC to bring an end to the Zimbabwean crisis,“ Tsvangirai said at a post-summit news conference.
The resolution calling for joint control of the ministry -- which controls Zimbabwe’s police and is the main sticking point in the talks -- was backed by all 15 members of SADC, said Arthur Mutambara, leader of a breakaway MDC faction.
"We need to form an inclusive government, today or tomorrow,“ SADC Executive Secretary Tomaz Salamao told reporters late on Sunday night after the summit in South Africa.
“... SADC was asked to rule and SADC took a decision and that’s the position of SADC. Now it’s up to the parties to implement,“ he said.
He said SADC lacked the "courage and decency to look Robert Mugabe in the eyes“ and tell him his position was wrong.
African leaders start regional summit on Zimbabwe
English-News Congo War
U.N. relief convoy enters east Congo rebel zone
Zimbabwe plans higher-value banknotes
English-News White gold
First ivory auction in decades held in Namibia
Der Kurz-Link dieses Artikels lautet: https://www.welt.de/104063901